ACT लाई SAT मा बदल्नुहोस्: स्कोर रूपांतरणको लागि A 2017 तालिका
ACT र SAT धेरै फरक छन्, तर तपाईं कुनै न कुनै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ
तलको तालिकाको साथ, तपाईं ACT पढाइ र गणित स्कोरहरूलाई SAT पढ्न र गणित स्कोरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। एसओटी स्कोर नम्बर 2017 बाट हो र पुनःनिर्धारित एसटैट को डेटा प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् जुन 2016 मा सुरु भएको थियो। समीकरणमा केवल गणना प्रत्येक गणनाको समान प्रतिशत प्रयोग गरेर गणना गरिएको थियो।
एक राम्रो एसएटी स्कोर र राम्रो ACT स्कोर को परिभाषा जुन तपाइँले आवेदन गरिरहनुभएको छ कलेजहरूमा निर्भर रहन्छ।
केहि विद्यालयमा भर्तीको लागि 500 ​​गणित पुरा तरिकाले उपयुक्त छ, जबकि अत्यधिक छनौट विश्वविद्यालयमा तपाईसँग आदर्श 700 वा माथिल्लो अंकको अंक हुनेछ।
ACT लाई SAT मा रूपान्तरण गर्नुहोस्
एसट ईआरडब्ल्यू / एक्टि अंग्रेजी गणित
800 36 99 + 800 36 99 +
790 36 99 +79035 99
780 36 99 + 780 35 99
590 24 7059024 73
520 1946 520 1949
440 14 19440 16 22
29051 29091
28041 280 8 1
27041 27061
26031 26041
25021 25021
240 1 1 240 1 1
ACT का लागि थप अधिकृत डेटा प्राप्त गर्न , ACT वेबसाइटमा राष्ट्रिय मानदण्डहरू हेर्नुहोस्। SAT को लागि, SAT वेबसाइट मा तपाईंको स्कोर पृष्ठ को समझ मा जाएँ र परीक्षा को लागि नवीनतम प्रतिशत दर्जा मा क्लिक गर्नुहोस।
SAT र ACT स्कोर कुराकानीहरूको छलफल
छात्रहरू प्राय: जान्दछन् कि उनीहरूको ACT स्कोरको अर्थ भनेको एसएटी (र उपाध्यक्ष) को तुलनामा।
कुनै पनि रूपान्तरण मात्र एक कच्चे अनुमानित छ। एसएटीले दुई घटकहरू छ: गणित र प्रमाण-आधारित पाठक (थप एक वैकल्पिक लेखन सेक्शन)। ACT मा चार घटकहरू छन्: अंग्रेजी भाषा, गणित, क्रान्तिपूर्ण पढाइ, र विज्ञान (वैकल्पिक लेखन सेक्शनका साथ पनि)।
2016 को मार्च मा शुरुवात, परीक्षा को सामाग्री एक बिट अधिक समान भयो जस्तै दुवै परीक्षा अब विद्यार्थीहरु लाई स्कूल मा सिकेको छ को परीक्षण गर्न को लागि काम गर्दछ (एसएटी छात्रों को योग्यता को मापने को लागि प्रयोग गर्न को लागि प्रयोग गरे विद्यार्थीले सिकेका थिए)। यद्यपि, जब हामी ACT स्कोरहरू SAT स्कोरहरूको तुलना गर्दछौं, हामी दुई फरक चीजहरू विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूसँग तुलना गर्दैछौं र प्रत्येक प्रश्नलाई अनुमति दिन्छु एक फरक राशि। यहां सम्म कि एक एक्टिट 36 मा एसएटी मा 800 को बराबर छैन। टेस्टले विभिन्न चीजहरू मापन गर्दैछ, त्यसैले एउटा परीक्षामा एक उत्तम स्कोरले अर्कोमा एक राम्रो स्कोरको रूपमा एकै कुराको अर्थ गर्दैन।
यदि, तथापि, हामी एक निश्चित अंक तल स्कोर गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिशतलाई हेर्छौं, हामी तुलनामा प्रयास गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि, SAT गणित खण्डमा,49% विद्यार्थीहरूले 520 वा कम अंक बनाए।
एक्ट मथ खण्डमा 49% लाइन 190 को स्कोरमा पुग्छ। यस प्रकार, एक 1951 अधिनियम गणित खण्डमा एसएटी गणित खण्डमा 520 सम्मको तुलनात्मक रूपमा छ।
फेरि, यो संख्याले एउटै कुराको मापदण्ड गर्दैन, तर तिनीहरू हामीलाई विद्यार्थीहरूको एक समूहको अर्को प्रदर्शनलाई तुलना गर्न अनुमति दिन्छ।
छोटोमा, माथिको तालिकामा भएको डाटा यो लायकको लागि लिन सकिन्छ। यो केवल एक त्वरित र कच्चे तरिका हो कि SAT र ACT स्कोर समान प्रतिशत मा गिर जान्छ।
स्कोर कुराकानीमा अन्तिम शब्द
टेबलले तपाइँलाई उच्च कलेजको लागि आवश्यक आवश्यक स्कोरको प्रकारको भावना दिन सक्छ। देशको सबैभन्दा छनौट महाविद्यालयहरू विद्यार्थीहरू जुन तिनीहरूको कक्षाको शीर्ष 10% मा स्थानित हुन्छन् भनेर स्वीकार्ने गर्छन्। आदर्श रूपमा, ती आवेदकहरूसँग पनि परीक्षा स्कोरहरू छन् जुन सबै परीक्षण-ग्राहकहरूको शीर्ष 10% (यदि उच्च छैन) मा हुन्छन्। परीक्षण-प्राप्तकर्ताहरूको शीर्ष 10% मा हुन, तपाईं एक 670 एसएट प्रमाण-आधारित पढाइ वा 30 ACT अंग्रेजी चाहानुहुन्छ, र तपाईं 680 एसएटी गणित स्कोर वा 28 ACT गणित चाहानुहुन्छ।
सामान्यतया, 700 हरूमा एसएटी स्कोरहरू र 30 सेकेन्डमा एक्टिभ स्कोरहरू देशका शीर्ष विश्वविद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक हुन जाँदैछन्।
एसएटी स्कोर तुलना प्रवेश वाशिंगटन डीसी कलेजमा
एनसीएए डिभिजन म पूर्वोत्तर सम्मेलन: एक्टिभ स्कोर तुलना
माउन्ट वेस्ट सम्मेलनको लागि एसएटी स्कोर तुलना
10 शीर्ष डाटाबेसहरू ब्रिटिश वंशावलीको लागि
इटालियनमा "अफ्रिकी" शब्दलाई कसरी सङ्घर्ष गर्ने?
प्रसिद्ध प्रेम र आनन्द उद्धरण
स्नो व्हाइट को विभिन्न रंगहरु
कसरी डायनासोर सेक्स छ?
LDS (Mormon) क्लिप आर्ट र डिजिटल छवियाँ खोज्नका लागि उत्तम स्थानहरू
10 साधारण एसिडहरूको नाम
रोमन क्याथोलिक पोप के हो?
पाण्डोराको बक्सको अर्थ
प्रमाण वा प्रमाण?
दार्शनिक महिला उद्धरण
यो समाधानमा रहनुहोस् - एक ठूलो बिलियर्ड्स क्यूईको लागि 300 डलर अमेरिकी डलर भित्र
बेबो नर्मन जीवनी
सेन्ट गेब्रियल आर्चनगल, पेट्रो सन्ट कम्युनिकेशन्स
स्वतन्त्र कार्यक्रमका लागि गुणस्तर के हो?
मानव पर्वोनोन्सहरूको भूमिका पर्दा र यौन इच्छामा
एक बार मिट्टिवा बन्ने
7 मण्डलीको प्रकाशले के प्रमाणित गर्छ?
हिलरी क्लिंटन जैव